Ukuphakelwa komugqa omncane wokukhiqiza okuphakelayo kwezinkukhu
Ama-pellets wokudla kwezinkukhu enziwa ngezinto ezahlukene ,Ukuhlanganiswa kwezinto zokusetshenziswa ezahlukahlukene kungahlangabezana nezidingo zezinkukhu zezakhi ezahlukahlukene.
Okuphakelayo okuhlaza kusetshenziselwa ikakhulukazi ukunezela ukusilela kwe-Vitamin, Ngokuvamile akuyona into edlula 30% kokuqukethwe okuhlanganisiwe .Kusetshenziswa njengemifino eluhlaza emisha,ama-akhawunti we-alfalfa 20% ukuze 30% wengxube, amahlamvu amahlamvu aluhlaza asetshenziswa njengamaqabunga ommbila, kushiya isikhonyane onsomi njll,yi-akhawunti ye 5% ukuze 10% kule ngxube.
Okuphakelwa kwamaphrotheni kubhekisele kokuphakelayo okuqukethwe ngamaprotheni angama-30%%%, kuvame ukubangelwa 5%-30% wengxube. Kunezinhlobo eziningi zokudla kwamaphrotheni okuvamile, njengekhekhe likabhontshisi nekhekhe lamantongomane,ikhekhe le-soya kanye nekhekhe lamantongomane 10% ~ 20% kule ngxube. Qhathaniswa nokudliwa kwezinhlanzi, okuwuhlobo lokudla okuphezulu kakhulu kwamaprotheni ezilwane, singangeza 5% ~ 15% kule ngxube. Ikhekhe le-Cottonseed livame ukungeza okungaphansi 7% kokuphakelayo okuxubile ngoba kuqukethe ubuthi.
Amandla abondlayo anjengommbila, ummbila, ibhali nosinizi kukhona 45%-70%, 5%-30%, 15%-20% futhi 10% ngokulandelana. Ngokuqondene nerayisi, esivame ukusetshenziswa njengesijobelelo, ukwengeza ngokuvamile akuyona ngaphezu kwe 8% kule ngxube.
Izinto ezilapha ngenhla zokufuya izinkukhu zifuneka kalula futhi intengo eshibhile.ukuphakama kakhulu uma uthenga ama-feed pellets emakethe. Ngokungqubuzanayo, kushibhile futhi kulula kakhulu ukuthenga a umugqa omncane wokukhiqiza okuphakelayo ukwenza izinkukhu zokudla ezifuywayo.
Ikhaya lisebenzisa umugqa omncane wokukhiqiza okuphakelayo uvame okuqukethwe 3 ubuqili,umshini owodwa we-crusher kanye ne-mixer integrated, ukuhambisa isikulufa esisodwa nomshini owodwa we-pellet. Kungagcwalisa ukugaya, ukuxuba, isitshalo sokukhiqiza i-pellet.this pellet mill singanciphisa ukusetshenziswa kwabasebenzi kude kakhulu. Ama-pellets enziwa ngumugqa wokukhiqizwa kokuphakelayo onendawo ebushelelezi, ubulukhuni obulinganiselayo, ukuvuthwa kwangaphakathi okujulile, futhi ingabulala ama-microorganisms we-pathogenic kanye nama-parasites. Into ebaluleke kakhulu ukuthi ikhwalithi yokuphakela ihlanzekile futhi ihlanzekile. Akukona nje kuphela ukufeza izidingo zokudla okunempilo zenkukhu, kodwa futhi inganciphisa ngempumelelo izindleko zokuphakelwa.